FIFA 16, na ny fomba famotehana saga mahatalanjona | Vaovao IPhone
Amin'ny maha-olon-tiana lalao baolina kitra manaja tena ahy sy amin'ny maha olon-dehibe ahy dia nilalao FIFA aho hatramin'ny fanontana voalohany, tamin'ny taona 1993 niaraka tamin'ny FIFA International Soccer, ary izany no antony nampihoron-koditra ahy ny zavatra nataon'ny EA Sports tamin'ny FIFA 16, nandrava tanteraka iray amin'ireo sagas lalao video nahomby indrindra tamin'ny fotoana rehetra. Na farafaharatsiny mba nanao izany tamin'ny kinova iOS niaraka tamin'ny FIFA 16 Ultimate Team. Fifanarahana mahatsiravina, menus tsy takatra ary gameplay tsy manam-paharoa izay mahatonga anao hanadino ireo sary tena tsara sy ny filalaovana tsara (ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara) an'ity lalao ity.
Efa famantarana ratsy ny mahita ao amin'ny App Store fa afaka tanteraka ny lalao. Manantena aho fa, toy ny tamin'ny kinova taloha, ny fividianana rindrambaiko ao anaty rindrambaiko dia ahafahanao manokatra maodin-dalao bebe kokoa, dia nidina aho mba hisintona azy, saingy tsy misy toa izany. Tsy maintsy milalao ny maody Ultimate Team ianao ary manadino izay lazain'ny famaritana an'io maody lalao io: "Mamorona sy milalao amin'ny ekipa nofinofisinao." Hanome anao mpilalao marobe erak'izao tontolo izao tsy fantatra izy ireo ho anao hanangana ekipa misy fahasahiranana lehibe. Ho tsapanao fa tsy manana lamosina miverina ianao, na tsy azo atao ny milalao forme 4-3-3 na 4-4-2 satria manana toerana tsy mifanaraka amin'ny formations mahazatra ny mpilalao.
Saingy vantany vao nahavita namorona ny ekipanay tamina fahasahiranana lehibe izahay ary nilalao lalao vitsivitsy, dia hitanay ny fomba nahazoanay fonosana marobe tamin'ireo mpilalao izay manampy anay hamorona ekipa mpifaninana bebe kokoa amin'ireo mpilalao fanta-daza kokoa. Aza manahy ny tenanao fa vatomamy kely fotsiny no omen'ny EA anao mba hanohizanao milalao satria aorian'ireo fonosana voalohany ireo dia tsy azo atao mihitsy ny mahazo mpilalao vaovao. Satria saika tsy azo atao ny mivezivezy amin'ny menus lalao mba hamindrana mpilalao ohatra. Sarotra ny mieritreritra ny menus izay mifamaly kokoa sy tsy mitombina kokoa noho ireo ao amin'ny FIFA 16, ka hatramin'ny farany hiafaranao ny lalao rehefa afaka roapolo minitra mandehandeha mamaky ireo menus nefa tsy mahazo izay tadiavinao.
Tena mahamenatra satria ny lalao mihitsy tsy ratsy velively, ary tsy ho lany na inona na inona izy ireo raha nanampy fividianana € 4 na € 5 hahafahanao mamoha ny lalao haingana sy ny maody fizaran-taona hahafahana milalao ny ekipa tianao indrindra, araka ny tokony ho izy. Rehefa milalao FIFA 16 ny olona dia ny hany zavatra tonga ao an-tsainao dia ny "Fa maninona no tsy misy manao PC Soccer ho an'ny iOS?".
Tsy ao amin'ny App Store intsony ny rindranasa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » FIFA 16, na ny fomba famotehana saga mahatalanjona
Alfonso R. dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamin'i Luis teo aloha. EA amin'ny iOS rehetra hitanao dia vola ho an'ny FIFA, tsy misy hafa. Ity shit ity dia mahasoa kokoa azy, na araka ny eritreritr'izy ireo, fa tsy ny zava-nitranga tamin'ny FIFA tsara indrindra ho an'ny iOS hatrizay, ny FIFA 14 izay napetrako.
Nanao sahala amin'ny nataonao ihany aho, nanantanteraka ny fanantenana aho fa efa nianatra avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana tamin'ny taon-dasa izy ireo ary tamin'ny alàlan'ny fandoavana vola dia azonao atao ny mamoha ny lalao haingana na ny vanim-potoana hahafahana milalao miaraka amin'ny ekipa tianao indrindra, izay rahateo no TIA REHETRA isika rehefa milalao FIFA, saingy tsia, mbola mitovy ihany na ratsy kokoa aza. Eny, tahaka anao ihany, naharitra tamiko teo amin'ny fitaovako ireo minitra vitsy nahalalako fa tampoka io fa ilay teo aloha kosa.
Na izany na tsy izany, mino tanteraka aho fa miankina amin'ny mpampiasa izany. Raha nametraka kintana tokana tamin'ny lalao Andriamanitra REHETRA REHETRA (raha tsy vitanao izany), ary mitsikera izany, amin'ny taona manaraka na koa amin'ny fanavaozana mega, ho hitanao ny fomba nahazoan'ny EA ny batery ary nanome anay izay tadiavinay rehetra. Manomboka mahita ny tomban'evitry ny olona ianao ary miaraka amin'ny sasany izay manondro azy ho masina.
Mamaly an'i Alfonso R.
garcia font dia hoy izy:
Malahelo ny maody lalao an-tserasera aho, ho fanampin'ny zavatra rehetra efa nolazainao, izay ampiako. Manohy amin'ny 14 aho.
Mamaly an'i garciafont
Juan dia hoy izy:
Miombon-kevitra aminao. Raha ny marina ny lalao ho FIFA FOR IOS dia heverina ho paikady mividy sy mividy izay tsy mbola misy lalao feno toy ny amin'ny pc. Mandreraka ilay ekipa farany.
Ratsy amin'ny faniriana rehetra ny FIFA, na dia tsy manana ny kinova farany aza ianao dia tsy afaka manohy milalao araka ny zava-mitranga amin'ny fifa14 ho an'ny ekipa farany na tsy manana ny lalao afak'andro. Tsy mandeha intsony io safidy io, tsy afaka mampiofana ianao, tsy afaka milalao tompon-daka amin'ny ekipa nasionaly, ary tsy tsapanao akory hoe iza no nitifitra tamin'ity ligin'ady ity. Azo antoka fa fanodinana fifa dimy
Valiny tamin'i Juan
Patrick dia hoy izy:
Ny lalao dia tsy ratsy, tadidio fa ny ekipa Fifa Ultimate, tsy misy adala, izao dia efa hanararaotra an'io maody io i EA izay manome vola anao. Ny olana dia apetraka fa tsy maintsy mividy eny na eny. Ohatra, isaky ny lalao dia manome anao vola kely latsaky ny 100, ary valopy misy mpilalao volamena 6 dia 10.000 XNUMX ...
Mpilalao volamena ratsy hita ao amin'ireto fonosana ireto. Koa satria raha te hanana iray manana salanisa mihoatra ny 85 ianao dia tsy maintsy mividy valopy manokana omen'ny mpilalao "tsara" anao ary vola 5.000 50 FIFA izany (€ XNUMX hey!)
Ankoatr'izay, ny tsenan'ny fifanakalozana, izay mifamatotra indrindra amin'ny faratampony (mivarotra sy mividy, manombatombana ...) dia tapahina, ka raha mametraka mpilalao manana salanisa 80 ianao, ny vidiny kely indrindra apetrany dia ny 10.000. Noho izany, tsy misy na iza na iza hividy amin'io tsenan'ny famindrana io.
Raha avelany hametraka ny vidiny tadiavinao ianao amin'ny famindrana ary ny tsena no mampiorina ny vidin'ny tinady, dia hamorona ekipa tsara kokoa ny olona, ​​toa ny ataony amin'ny PC sy consoles.
Valiny tamin'i Patrick
Gucci dia hoy izy:
Ny filaharana nomen'ny fanatanjahan-tena isan-taona dia very, nandefa lalao FIFA hafa miaraka amin'ny maody lalao sy fanatsarana ny sary, tena mahamenatra fa aorian'ny FIFA 15 dia ratsy kokoa ny zava-drehetra raha ny tena izy dia manantena sary mahafinaritra vaovao FIFA izahay, ekipa ary ny fomba filalaovana, ny vanim-potoanan'ny lalao haingana sns ... Tsy azoko atao ny mampiasa Internet raha tsy amin'ny lalao internet ihany no hadalana ratsy indrindra azon'ny sports atao amintsika Mbola manana FIFA 12,13, 14 ary XNUMX amin'ny findaiko aho, manantena fa indray andro any izy ireo dia hiverina hamoaka ny lalao araka ny tokony ho izy ary hampiato ny fanesorana an'io ekipa fifa ekipa farany io.
Mamaly an'i Gucci
Ned For Speed: Tsy misy fetra - Diso fanantenana indray ny zava-kanto elektronika
Ny kaody loharano mankany amin'ny jailbreak iOS 8.4.1, misy izao